တစ်ဦးကယုံကြည်စိတ်ချရသောရှန်ကျန်းဆားကစ်ဘုတ်ထုတ်လုပ်သူ - Shenzhen WMD Circuits, Ltd
နေအိမ် » သတင်း » ကုမ္ပဏီသတင်းများ
အချိန်: 2010-04-27 hits:
မှတ်ယူ, လူတိုင်း circuit ကိုပျဉ်ပြားနှင့်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ပါတယ်. ယနေ့ခေတ်, ဆားကစ်ဘုတ်ကျယ်ပြန့်တွေဖြစ်တဲ့အဓိကဆက်သွယ်ရေးအီလက်ထရွန်းနစ်အဖြစ် High-end စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အသုံးပြုကြသည်, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများ, နှင့်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များ. ထိုကွောငျ့, အားလုံးအဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်မြင့်မားသောအရည်အသွေးဆားကစ်ဘုတ်ထုတ်လုပ်သူများကိုရွေးမည်. စကားများ, ဘယ်လိုကုမ္ပဏီများယုံကြည်စိတ်ချရသောရှန်ကျန်းဆားကစ်ဘုတ်ထုတ်လုပ်သူကိုရွေးချယ်သင့်တယ်?
ဆားကစ်ဘုတ်များထုတ်လုပ်အများအပြားဖြစ်စဉ်များကပါဝင်ပတ်သက်, ဒါကြောင့်အရည်အသွေးအလွန်အရေးကြီးပါသည်. ရှန်ကျန်းဆားကစ်ဘုတ်ထုတ်လုပ်သူတင်းကြပ်စွာထုတ်လုပ်မှုကာလအတွင်းအရည်အသွေးထိန်းချုပ်. သည်အခြားထုတ်လုပ်သူနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ, သူတို့ကပိုသတိထားနဲ့သတိထားများမှာ. တစ်ခုချင်းစီဖြစ်စဉ်ကိုထုတ်ကုန်သေချာစေရန်အထူးစမ်းသပ်စက်တွေရှိပါတယ်. အရည်အသွေး.
2. ရှန်ကျန်းဆားကစ်ဘုတ်ထုတ်လုပ်သူ၏ကောင်းသောအချိန် concept ကို Select လုပ်ပါ
တိုက်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့ကုန်ထုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်, အဆိုပါပေးပို့ကာလဖောက်သည် \_ 's ဖန်စီဒါပေမယ့်လည်းထုတ်လုပ်သူ \_' s ဖန်စီမသာဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါရှန်ကျန်းဆားကစ်ဘုတ်ထုတ်လုပ်သူအမြဲတမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ဖြန့်ဝေကာလမှာရည်မှန်းခဲ့ကြ, နှင့်ဖောက်သည်များကျေနပ်အောင်နှင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုကျေနပ်ဖို့အချိန်များ၏အယူအဆရှိ.
မည်သို့ပင်ထုတ်လုပ်မှု၏စင်မြင့်၏, ကောင်းသောဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူရှန်ကျန်းဆားကစ်ဘုတ်ထုတ်လုပ်သူသူတို့ဖောက်သည်အရှိဆုံးလိုအပျကွောငျးတိုက်နယ်ပျဉ်ပြားထုတ်လုပ်နိုင်သည်ကိုသေချာစေရန်လုပ်ငန်းဖောက်သည်များနှင့်အတူဆက်သွယ်ရေးနှင့်နီးစပ်အာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်. ဖောက်သည်များကထောက်ပံ့ပေး circuit board ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရှိပါတယ် အကယ်., ထို့နောက်ဝန်ဆောင်မှုကောင်းလှ၏. ထုတ်လုပ်သူဟာအပြောင်းအလဲနဲ့လုံလောက်သောဆက်သွယ်ရေးကတဆင့်ရေးဆွဲအတူတင်းကျပ်သောအညီဆောင်ရွက်နိုင်သေချာစေပါလိမ့်မယ်.
Ltd မှဤအရာအားလုံးဖြည့်ဆည်းပေးနိုငျ Shenzhen WMD Circuits, ငါတို့သည်သင်တို့၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအတွက်စောင့်ဆိုင်းဖို့ဒီမှာပါ, ငါတို့သည်သင်တို့အားလုံးကိုအကောင်းဆုံးကိုဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်.
နောက်တစ်ခုအဘယ်ကြောင့် pcb ဘုတ်အဖွဲ့ဖိုင် Gerber ဒေတာကူးပြောင်းပြီးတော့ဘုတ်အဖွဲ့ကိုကိုင်တွယ်ရပါမည်?